Faah Faahin Kasoo baxeya Dagaallo xoogan oo maanta ka dhacay Garbaharey |
Faah Faahin Kasoo baxeya Dagaallo xoogan oo maanta ka dhacay Garbaharey
Wararka ka imaanaya magaalada Garbahaarey ee xarunta gobalka gedo ayaa sheegayo in dagaal aad u qaraar uu deegaanka Qodaxleey ku dhex marey Ciidamada Dawladda Fedaraalka ah iyo dagaalyamamiinta Xarakada Alshabaab.
Dagaalkaan ayaa imaanaya kadib markii Ciidamada Dawlada ay weerarka iyagu ku qaadeen maleyshiyaadka Alshabaab ee ku sugnaa deegaanka Qodaxleey, halkaasoo uu ka qarxay dagaal qaraar muddo 3 saacadood ah socdey, kaasoo la isu adeegsadey hubka noocyadiisa kala duwan.
Qaar kamid ah dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqlayeen dhawaqa madaafiicda iyo rasaasta fudud ee ay labada dhinac isu adeegsanayeen oo, isla markaana xaqiijiyey in ay indhahooda ku arkeen dhaawac iyo dhimashaba.
Taliyaha Ciidamada Dawladda ee gobalka Gedo Cabdullaahi Cismaan Isxaaq oo ka hadley dagaalkaas ayaa sheegey in ay iyagu weerarka ku qaadeen Shaabaabka, kaasoo uu sheegey inuu dhinac ka yahay Hawgal guud oo ay wadaan Ciidamada dawladda, kaasoo socdey muddo bil ah.
Waxaa Cabdullaahi Cismaan uu sheegey in dhinacooda uu soo gaarey qasaare fudud oo ah dhaawaca hal Askari, hase yeeshee ay maleyshayada Alshabaab dagaalkaas oga dileen 12 qof, isla markaana ku furteen hub iyo saanad kale oo badan.
Weli si dhab ah looma oga qasaaraha dhabta ee uu sababey dagaalkaas, mana jiraan warar madax bannaan oo inoo xaqiijinayo sheegasha Taliyaha Ciidamada ee Cabdullaahi Cismaan. Sidoo kale ma jiraan wax war ah oo kaas ka duwan oo naga soo gaarey dhinaca Alshabaab.
Xaaladda deegaanka Qodaxleey haatan waa mid deggan, kaasoo ay gacanta ku hayaan Ciidamada Dawladda Fedaraalka ah.’